“အခုလိုတော်လှန်ရေးကာလမှာ စစ်တပ်ရဲ့ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုကို ပြည်သူလူထုတိုင်းရင်ဆ… – PVTV Myanmar
·9months ago ·44 Comments
“အခုလိုတော်လှန်ရေးကာလမှာ စစ်တပ်ရဲ့ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုကို ပြည်သူလူထုတိုင်းရင်ဆိုင်နေရတဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေ ရှိနေသည့်တိုင်အောင် ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးနိုင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနက ဒီတာဝန်တွေကို ထမ်းဆောင်သွားမှာပါ။ ဒီလိုတာဝန်တွေကို ထမ်းဆောင်သွားတဲ့အခါမှာ အောက်ပါလုပ်ငန်းစဉ် သုံးခုနဲ့ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတာ အသိပေးပြောကြားလိုပါတယ်။
(၁) လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများကို တိုင်ကြားနိုင်မယ့် ယန္တရားကိုထူထောင်ပြီး စနစ်တကျမှတ်တမ်းတင်ခြင်း . . .
(၂) အပြစ်ဒဏ်မှကင်းလွတ်နေမှု (Culture of Impunity) ကို ရပ်တန့်စေအောင်လုပ်ဆောင်ခြင်း . . .
(၃) လူ့အခွင့်အရေး အသိပညာတွေ ထွန်းကားလာအောင်လုပ်ဆောင်ခြင်း . . .”
Like – 8.3K Share – 1026
Ji Tawng says:
2021-05-03 at 7:32 PM
လေးစားတယ် ထောက်ခံပါသည် အရေးတော်ပုံ အောင်ရမည်
H.E U Aung Myo Min
Aung Pyae Phyo says:
2021-05-03 at 7:36 PM
အရင်ကတည်းက စိတ်ဓာတ်ကို လေးစားပါတယ်။ တိုင်းပြည်တာ၀န် ထမ်းဆောင်နိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
Ko Myo Ko Myo says:
2021-05-03 at 7:44 PM
နောက်ထပ် ဆရာ တွေ အများကြီး ရှိပါသေးတယ် လုပ်ပါ အားလုံး ကျွန်တော် တို့ ဘုံရန်သူကိုတိုက်နေတာ ခုဆရာကို မလေးစားလို့ပြောတာမဟုတ် သူက အားလုံး ရင်ထဲက. ချစ်တဲ့ဆရာ ပြိုင်တူတွန်းလျင် မအလ အဝီစိ ရောက်မည်
May Cho Cho says:
ဝန်ကြီးရှင့် ကျမတို့ လူထုခေါင်းဆောင်ကြီးလည်း လူ့အခွင့်ရေး ချိုးဖောက်ခံနေရပါတယ် အရင်ဆုံးကူညီပေးပါ
U Thein Win says:
2021-05-03 at 8:05 PM
အရေးယူ နိုင် ရန် ဆောင်ရွက်ပေးစေလိုပါတယ် ။
2021-05-03 at 8:09 PM
ဝမ်းသာ လိုက် တာ.. လေးစားချီးကျုး ဂုဏ် ယူ ပါ တယ် ကို အောင် မျိုး မင်း
Jennifer Su says:
2021-05-03 at 8:10 PM
အခြေခံ လူ့အခွင့်အရေးတွေတောင် နေ့စဉ်နဲ့ အမျှ ဆုံးရှူံးနေရလို့ ၀န်ကြီးတို့ပေါ်ပေါက်လာတာ ၀မ်းသာရပါတယ်။ မြန်မာပြည် အရေးခင်း အမြန်ပြီးပီ လူသားတိုင်း အခွင့်အရေး အပြည့် ရကြပါစေ။ 🙏🙏🙏
U Khin Maung Aye says:
2021-05-03 at 8:17 PM
မြန်မာပြည်မှာ Mobile phone မရှိသေးတဲ့အချိန်ကတဲကပြည်ပသတင်းဌာန တွေမှာဦးအောင်မျိုးမင်းရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုကြည့်ခဲ့ လေးစားခဲ့မိပါတယ်။
Thandar Htwe says:
​ဘေးရန်ကင်းကာ ကျန်းမာစွာနဲ့ နိုင်ငံ​ကောင်းကျိုးကို စိတ်ရှိတိုင်း လျင်မြန်ထိ​ရောက်စွာ ​
Thaw Zin Myint says:
NUGက ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ လူမှန် နေရာမှန် တွေ မြင်တွေ့ရတော့ အားတက်မိပါတယ်
Htet Wai Yan says:
2021-05-03 at 9:00 PM
အဓိကကတော့ ပို့/ဆက်ဝန်ကြီးလိုပါတယ်။ internet နဲ့ ဆက်သွယ်ရေး တွေ ကသူတို့ မှောက်လိုရာမှောက် လုပ်နေကြတာပါ။လူထုဆက်သွယ်ရေးဟာခက်ခဲနေပါတယ်။ပို့/ဆက်ဝန်ကြီးဆို ကုန်းလမ်း/ရေလမ်း/လေကြောင်းလမ်းတွေက CDM တွေစုစည်းပြီး ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းလို့ရပါတယ်။က.ည.န က CDM လုပ်နေတဲ့ အမူထမ်းအရာထမ်း မနည်းပါဘူး။ သူတို့ကိုလည်း ကြည့်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။Just အကြုံပြုခြင်းပါ
2021-05-03 at 9:09 PM
Be tough on taking real actions on violators.
2021-05-03 at 9:13 PM
Hnin Thet Shwe says:
2021-05-03 at 10:15 PM
ဝန်ကြီး အား လေးစားစွာ ကြိုဆိုထောက်ခံပါ၏။ ကျန်းမာဘေးကင်းစွာ ပြည်သူ့အကျိုး ထမ်းဆောင် နိုင်ပါစေ။
Khin Saw Aung says:
2021-05-03 at 10:17 PM
2021-05-03 at 10:41 PM
Wahwah Htun says:
ဘေးကင်းစွာဖြင့် တာဝန်များထမ်းဆောင်နိုင်ပါစေ 🙏🍀
Win Thaw Thar says:
2021-05-04 at 12:21 AM
Dal Mang Naulak says:
2021-05-04 at 5:15 AM
လူ႔အခြင့္အေရး တရားဥပေဒ ဆိုတာမရွိတဲ့ အေမွာင္ထဲမွ အလင္းကို လမ္းညြန္႔ေပးမဲ့ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီး
Do Mie says:
We strongly support NUG. ကျန်းမာပျော်ရွှင်ဘေးကင်းကြပါစေ။
2021-05-04 at 7:11 AM
Nweni Nway Oo says:
2021-05-04 at 8:17 AM
2021-05-04 at 9:08 AM
တာဝန်ခံမှု အပြည့် ရှိမယိ့သူ လို့ ယုံကြည်ပါနယ်
ဖိုး သူ တော် says:
ယုံကြည်စွာထောက်ခံကြိုဆိုပါတယ်..နိုင်ငံအကျိုး ပြည်သူ့အကျိုး အောင်မြင်စွာထမ်းရွက်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပါတယ်
2021-05-04 at 12:02 PM
ပြည်သူ့လွှတ်တော် CRPH နှင့် အမျိုးသားညီညွတ်ရေး NUG အစရှိသော မြန်မာနိုင်ငံအရေးအစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းနေကြသော ပြည်သူ့အစိုးရ လူကြီးမင်းများအားလုံး ကျန်းမာချမ်းသာ ဘေးဘယာမှန်သမျှ ကင်းဝေး အစစအရာရာ လုံခြုံ ပြုသမျှကိတ်စမှန်သမျှ အမြန်ဆုံး အောင်မြင်ကြပါစေရှင်🙏
Hang Niang says:
Khai Lek says:
U Tin Soe says:
2021-05-04 at 5:47 PM
2021-05-04 at 6:13 PM
Ohn Marr says:
2021-05-04 at 6:45 PM
Soe Min says:
2021-05-04 at 7:51 PM
Thi da Soe says:
Byu Harr says:
သူက နွဲ့ေနတဲ့ ဝန်ေခြာက်ကလေးပေါ့😂😂😂
Mya Thet Htar says:
2021-05-05 at 8:06 AM
တိုင္းျပည္နဲ႔လူမ်ိဳးအက်ိဳး မ်ားစြာသယ္ပိုးႏိုင္ေသာ ဝန္ႀကီး ျဖစ္မယ္လို႕ ယံုႀကည္ပါတယ္
2021-05-05 at 6:23 PM
We strongly support NUG Ministers.
2021-05-05 at 8:36 PM
Komyat Swe Kyaw says:
2021-05-07 at 2:18 PM
2021-06-14 at 5:15 PM
2021-08-12 at 11:40 PM
2021-08-12 at 11:41 PM